Fahaleovantena - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > fahaleovan-tena
Firy ny "lehilahy namboarin-tena" fantatrao? Ny marina, mazava ho azy, dia tsy misy amintsika manamboatra tena. Manomboka ny fiainantsika ho teboka kely isika ao an-kibon-drenintsika. Teraka malemy tokoa isika ka raha avela irery dia ho faty mandritra ny ora maro.
Fa rehefa tonga eo amin'ny maha-olon-dehibe azy isika dia mihevitra fa mahaleo tena ary mahavita azy irery. Maniry ny fahalalahana isika ary matetika mieritreritra fa ny fahafahana dia midika fa miaina amin'ny fomba rehetra sy manao izay tiantsika.
Toa sarotra amintsika olombelona ny manaiky ny fahamarinana tsotra hoe mila fanampiana isika. Ny iray amin’ireo andinin-teny tiako indrindra dia ny hoe: “Izy no nanao antsika, fa tsy antsika ho olony sy ondry fiandriny.” ( Salamo 100,3 ). Tena marina tokoa izany ary sarotra ho antsika ny miaiky fa Azy isika - fa “ondry fiandriny” isika.
Indraindray ny krizy amin'ny tazo ihany amin'ny fiainana, rehefa tara loatra, dia toa mandrisika antsika hiaiky fa mila fanampiana isika - ny fanampian'Andriamanitra. Toa mino isika fa manana ny zony rehetra hanao izay tiana sy amin'ny fomba tiantsika, saingy mifanohitra amin'izany fa tsy faly amin'izany isika. Ny fandehanana araka ny fombantsika sy ny fanaovana izay tiantsika manokana dia tsy mitondra ny fahafaham-po lalina sy ny fahafaham-po izay irintsika rehetra. Toy ny ondry nania isika, fa ny vaovao tsara dia na dia eo aza ny hadisoana lehibe vitantsika eo amin'ny fiainana dia tsy mitsahatra ny mitia antsika Andriamanitra.
Amin’ny Romana 5,8-10 Hoy ny apostoly Paoly: «Fa asehon’Andriamanitra ny fitiavany antsika satria maty ho antsika i Kristy fony mbola mpanota isika. Tsy mainka ve fa hovonjeny amin'ny fahatezerana isika ankehitriny fa nohamarinina tamin'ny rany, satria raha efa nampihavanina tamin'Andriamanitra isika tamin'ny fahafatesan'ny zanany fony mbola fahavalontsika, mainka fa hovonjeny amin'ny fiainany isika ankehitriny, efa mihavana isika izao. »
Tsy manary antsika mihitsy Andriamanitra. Mijoro eo am-baravaran'ny fontsika izy ary mandondona. Mila manokatra varavarana fotsiny isika ary avelao hiditra. Raha tsy misy Andriamanitra dia tsy misy ary tsy mahatanteraka ny fiainantsika. Fa Andriamanitra nahary antsika mba hizarana ny fiainany amintsika - ilay fifaliana sy fiainana feno niarahan'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy, zanaka malalaky ny Ray, dia tonga mpikambana feno amin'ny fianakavian'Andriamanitra isika. Amin'ny alalàn'i Jesosy dia efa nataon'Andriamanitra ho fananany isika ary nofatorany ho azy amin'ny alalany amin'ny fitiavany mba tsy hamelany antsika na oviana na oviana. Ka maninona moa raha tsy mino ny vaovao tsara ianao, mitodiha any amin'Andriamanitra amin'ny finoana, mandray ny hazo fijaliana ary manaraka an'i Jesosy Kristy? Io no lalan-tokana mankany amin'ny tena fahafahana.